Xitaa Haddii Musqusha uu kayaryahay 5 mitir oo laba jibbaaran, Qayb Qoyan iyo Qallalan Maaha Wax Adag Inaan Iga Adkaan!
Bogga ugu weyn / blog / Xitaa Haddii Musqusha uu kayaryahay 5 mitir oo laba jibbaaran, Qayb Qoyan iyo Qallalan Maaha Wax Adag Inaan Iga Adkaan!
2021 / 01 / 15 Qoondayntablog 5305 0
Iskuulka Ganacsiga Musqusha 2020-11-17
Xitaa haddii musqusha ay ka yar tahay 5 mitir laba jibbaaran, qoyan iyo qoyaan qalalan ma adka inay iga adkaadaan!
Maanta waxaan ku siinayaa xoogaa dhiirrigelin ah qurxin, dhammaystiraya kiiska qurxinta musqusha!
Qeybta 1 Madoow Aluminium Madoow
Marka hore fiiri adeegsiga labiska ah ee saxanka, laakiin sidoo kale laba muraayadood, ayaa la kulmi kara laba qof isla waqti isku mid ah. Qeyb qoyan oo qalalan adoo adeegsanaya muraayad muraayad aluminium madow ah, oo isu eg oo casri ah.
Khadadka waa sahlan yihiin waana siman yihiin, mana jiro wax dareen ah oo lagu ballaarinayo musqusha aagga yar.
Ka hor intaadan rakibin qaybta, maskaxda ku hay in rakibidda dabaqa ay sidoo kale aad muhiim u tahay in laga hortago socodka biyaha.
Looga dhigay qaab qol quraarad ah, aad u waasac ah, dareen saddex-cabbir ah, si loogu gaaro saameyn wanaagsan oo qoyan iyo mid qalalan.
Risaalo xariif ah.
Qaybta. 2 Muraayadda Muraayadda
Musqushaani waa mid aan caadi aheyn oo afar geesood ah. Qubeyska iyo qubayska oo isku dhafan hal, si looga hortago biyo daadinta, waxaa loo isticmaalay qeybinta muraayadda.
Isla qaab qaybsiga ayaa loo isticmaalaa.
Muraayadda muraayadda leh ayaa ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee musqusha, taas oo ka dhigaysa aaggan mid aan monotonous ahayn.
Muraayadda bilaa bireedka ah iyo muraayadda aan xaddidnayn ayaa si fiican iskula socda
Musqusha midabka adag waa muuqaal.
Dareemo quruxda naqshadeynta.
Qaybta 3 Qaybta gidaarka
Qaybta gidaarka ee udhaxeysa meesha lagu maydho iyo meesha dharka lagu dhaqo waa mid xoogan oo qurux badan.
Qaybta gidaarku waxay ka dhigaysaa laba aag oo isku meel ka madax bannaan oo waasac ah.
Hore:: Jiilaal baa halkan jooga! Miyaan Iibsadaa Qubeys Heer-kulka? Dhageyso Khubarada, Layaab Ma Leh Inta Dad Badan Doonayaan Inay Waxka Beddelaan !!! Next: Musqusha Jabbaan, Towladda tuwaalka ayaa khafiifsan ilaa 10 sentimitir, si habeysan ayaa loo dhigaa
Soo jeedin laxiriirta
Faallooyinka tubbada Delta Shower: 2021 Tilmaamaha Iibsiga ee Delta Delta Bulukeetooyinka
2021 / 02 / 04 3471
Faallooyinka qasabadda Delta jikada: 2021 Tilmaamaha Iibsiga ee qasabadaha Delta jikada
2021 / 02 / 03 3830
Musqusha Jabbaan, Towladda tuwaalka ayaa khafiifsan ilaa 10 sentimitir, si habeysan ayaa loo dhigaa
2021 / 01 / 16 6156
Jiilaal baa halkan jooga! Miyaan Iibsadaa Qubeys Heer-kulka? Dhageyso Khubarada, Maya ...
2021 / 01 / 15 6074
Naqshadeynta Musqusha Guriga Si Aad U Qurxdo Oo Xaalad Wanaagsan Ugu Leedahay Showe ...
2021 / 01 / 11 6642
Sidee Loo Sameeyaa Haddii Qubayska Mar Kale La Xayiro? Ha degdegin! U Adeegso Si aad u qoyso…
2021 / 01 / 11 5151
！Fadlan soo gal
Guji si aad u joojiso jawaabta
Naaneyste ： E-mail: